Kooxda Liverpool Oo Diyaar U Ah Inay Dhageesato Dalabyada Ku Aadan Christian Benteke – STAR FM SOMALIA
Wargeska Telegraph ayaa daabacay warbixin ay kasoo xigteen kooxda Liverpool kaasi oo ku aadan mustaqbalka weeraryahanka reer Belgium Christian Benteke.
Macalin Jurgen Klopp ayaa madaxa Liverpool suuqa Yurub u qaabilsan u sheegay inuu ka maarmo Benteke sidoo kalena la dhageysto dalabyada xidigan ku aadan.
Benteke ayaa ku guul dareestay inuu la qabsado shaxda macalin Klopp sidoo kalena xidigan niyad jab weyn ayaa heesto madaama uusan haatan ka mid ahayn xidigaha Liverpool joogtada ugu cayaaraan.
Shabakada Bleach Report ayaa dhankeeda qortay in Liverpool ay dhageesan doonto dalabyada ku aadan Benteke ayagoo og xidigan £32million xagaagii dhawaa ay naadiga Aston Villa kasoo iibsadeen qiimahaas iyo wax u dhow inaysan ku heli doonin.
Benteke dhankiisa wuxuu doonayaa inta ka harsan xili cayaareedkan inuu Liverpool kasii mid ahaado si mustaqbalkiisa cayaareed uusan jah wareer u galin sidoo kalena looga reebin tartanka Euro 2016.
Macalin Klopp diyaar ayuu u yahay maal maha ka harsan bishan Janaayo hadii dalab ku aadan xidigan kooxdiisa soo gaaro inuu iibiyo ama xagaaga dambe uu si toos ah garoonka Anfield kaga diro.
Kooxaha xidigan saxiixiisa xiiseenayaan waxaa ka mid ah Chelsea, PSG, Tottenham iyo Dortmund balse weli dalab rasmi ah Liverpool uma soo gudbinin.